Melohan’ny Fitsaràna Indiana Ny Biraon’ny Horonantsary Noho Ny ‘Fanivanany’ Sarimihetsika Miresaka Fihinanana Rongony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2016 20:05 GMT
Fanambàrana avy tamin'ny Dikasary – tamin'ny fampahafantarana ofisialin'ny UDTA Punjab
Vaovao farany: 14 Jona 2016: Nafahan'ny Fitsarana Tampony ao Mumbai ny Bollywood film Udta Punjab nony farany, miaraka amin'ny fanapahana iray sy fanovàna iray taorian'ny fifandroritana nandritry ny herinandro tamin'ny Biraon'ny sivana. Nilaza ny mpitsara C.S Dharmadikari tamin'ny “Central Board of Film Certification (CBFC)” hoe: “Aza manao fomban-drenibe. Miovà manaraka ny fotoana ankehitriny. Ilain'ny CBFC ny tsy dia mora tohina loatra amin'ny resaka zavakanto.
Ny 17 Jona no voatondro hamoahana ilay sarimihetsika ary hisy sertifikà havoakan'ny CBFC mifanaraka amin'ireo taridalan'ny Fitsaràna Tampony.
Fandresena goavana io ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika Indiana izay efa ela be no nitaraina momba ny sivana manjo ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra.
Mivaky toy ity eto ambany ity ny lahatsoratra tany ampiandohany
Miaraka amin'ireo tranganà sivana maro sy fibahanana mikendry ny ‘fahalalahana miteny’, misikina ireo fomba rehetra amin'ny fanandramana ny hamoaka ilay horonantsarin'ny Bollywood ‘Udta Punjab‘ tsy asiana fanapahana lehibe, ny 17 Jona, ireo mpanao horonantsary Indiana.
Miresaka ny loza mitatao vokatry ny rongony ao Punjab, fanjakana Indiana, ary tantanin'ny tale Abhishek Chaubey, ilay horonantsary mampiseho an'ireo mpilalao sarimihetsika Indiana Shahid Kapur, Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt ary Diljit Dosanjh.
Nifanehatra tamin'ny olana tamin'ny biraon'ny sivana Indiana io, izay nikendry fanovàna 89 isa teo aloha, talohan'ny nanapahan'ny kaomity nasiam-panovàna, fanapahana niisa 13.
Ao amin'ny Fanambaràna Manerantany momba ny Zon'olombelona sy ny fahalalahana miteny, ny fahafahan'ny tsirairay maneho hevitra tsy misy sakantsakana #UdtaPunjab
Ny Zomà teo, niaiky tao amin'ny fitsaràna, ny hanapaka ampahany iray amin'ny horonantsary ireo mpamokatra ny horonantsary ahitàna ny horonantsary Phantom sy ireo andianà horonantsary mitohy Balaji, fa entitra kosa hoe tsy afaka manapaka ampahany hafa intsony.
Nanapatra ny fony tao amin'ny Twitter, noho io sivana tsy misy fanavahana io, ilay mpamokatra ny horonantsary, Anurag Kashyap, ary nitory ny Filankevitra Foiben’ Mpanome Fahazoandàlana ny Horonantsary (CBFC) tany amin'ny fitsaràna.
Tsy misy horonantsary tena milaza ny marina mihoatra noho ny UDTA PUNJAB .. Ary ny olona na antoko manohitra an'io ankehitriny dia MELOKA amin'ny fanindrahindràna ny rongony.
Niteny mafy an'i Pahlaj Nihalani, filohan'ny CBFC, ny Fitsaràna Avon'ny Bombay tarihan'ny mpitsara Dharmadikari, ary nilaza hoe “Tsy tafiditra n'aiza n'aiza amin'ny lalàna mihitsy ny teny hoe sivana. Ny manome fahazoandàlana ny famoahana ny horonantsary ho azo alefa jeren'ny daholobe no fahefanareo.”
Nibitsika nivantana avy ao amin'ny efitry ny fitsaràna ilay mpanao gazety Shilpa Rathnam, satria nohenoina ny Zomà ilay raharaha:
Mpitsara: Maninona ianareo no tsy afaka manindry bip ireo ompa?
Mpisolovava ny Udta Punjab: Horonantsary mampiseho ny tena fiainana io. Toy izany ny fitenin'ireo olona amin'ireny ampahany ireny.
Mpitsara: Voafehy amin'ny fanontaniana tokana izany, manindrahindra ny rongony ve ilay horonantsary?
Judge: Koa nahoana àry no tsy nobahananareo ilay horonantsary?
Mpitsara: Tokony manome fahazoandàlana fotsiny ny CBFC, tsy manao fanivanana. Ny vahoaka mpijery no mpanivana lehibe indrindra. Tsy mila manivana akory ny CBFC.
Efa nanao sivana horonantsary maro samihafa teo aloha, noho ny tsy fanarahana ny kolontsaina sy ny fihetsehampo Indiana, i Pahlaj Nihalani, fantatra amin'ny maha akaikin'ny governemanta havananan'ny Praiminisitra Indiana Narendra Modi azy.
Ohatra, ny taona 2015, nibahana ny famoahana ny “Fifty Shades of Grey” nasiam-panovàna kely ny CBFC.
Nataony ho tsy mifanaraka amin'ireo mpijery Indiana ihany koa ilay ampahany roa amin'ny horonantsary nisy ny orok'i James Bond, ka nahatonga tsikera be tao amin'ny media sosialy.
Ny tena marina, tokony hanana oroka tena tsara aloha i Pahlaj Nihalani mialohan'ny hanapahany hevitra raha toa ka mihoatra ny fefin'ny kolontsaina Indiana na tsia ny halavany!!
Nanadihady tsirairay ireo fanapahana nolazain'ny CBFC hatao ny tao amin'ny fitsaràna, ary nandroso hevitra ny hanapahana ampahany iray ihany, izay neken'ireo mpamokatra horonantsary.
Teo aloha, tafiditra tao anatin'ireo fanapahana noraràna ny fampisehoana mibaribary ny fihinanana rongony, fampiasàna fiteny sy tenin-jatovo sahala amin'ireo mpiasan'ny antoko, Parlemanta sy ny sisa.
Nofafan'ny fitsaràna tao amin'ireo mety ho sivanina ireo rehetra ireo, ary nomarihany ny anjara asa fanelanelanany tamin'ny resaka sy fotokevitra ijoroan'ny horonantsary.
Tamin'izany, hanao fifidianana ny fanjakana Punjab ny taona 2017, ary maro ireo antoko politika any India mahatsapa fa natao ho an'ny tombotsoan'ireo antoko havanana ao amin'ny fitondrana amin'izao io ‘resaka’ io, mba hanasemporana ireo feo manamafy ny olan'ny rongony izay manimba ny tanora rehetra.
Nanameloka ny fanapahankevitr'ilay kaomitin'ny sivana ny hibahana ny famoahana ilay horonantsary, ireo mpamokatra horonantsary maro, mpanakanto ary mpanao politika, ary nilaza izany ho ‘manohitra ny fahalalahan'ny famoronan'ny mpanakanto’.
Namoaka ny fomba iainana mampalahelo atrehan'ireo horonantsary ny #UdtaPunjab. Fa nilaza kosa fa soa fa afaka mitsangana ireo vahiny ary miaraka mitady ny rariny. Faly
Amin'ny Alatsinainy ny fivoahan'ny didy farany manohitra ireo fanapahana.
Manoratra izao ao amin'ny gazety The Wall Street Journal i Gabrielle Parussini:
Vao maika nampisy fampielezankevitra be ilay adihevitra mikasika ilay horonantsary: nojeren'olona maherin'ny 12 tapitrisa isa tamin'ny YouTube ny ampahan-tsary famantarana.
Nanoratra izao tao amin'ny NDTV i Nitin Pai:
Ny tena marina, nanokatra ny hidin'ny tsy fahazakàna fifaninanana, ny fampiasanao faneriterena ara-politika mba hibahanana ny fandefasana zavatra ataonao hoe tsy azo ekena. Matetika, fanandramana fampisehoana fahefàna ara-politika, sy ireo mody filazàna fa nanindrona fihetsehampo, ny fanivanana horonantsary. Mba hanavotana ireo indostria antsika amin'ny tsy fahazakana fifaninanana, tsy maintsy atao tsy miankina amin'ny resaka politika sy arakasa tsara ireo fanapahankevitra mikasika ny endrika ivelany.